कीर्तिपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटकाे माहाेल फर्कदै ! - Nepal Cricket
कीर्तिपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटकाे माहाेल फर्कदै !
नेपाली क्रिकेट टिम दुई बर्षपछि घरेलु मैदानमा अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने तयारीमा छन । एसोसियट क्रिकेटमा दर्शकको हिसावले निकै लोकप्रिय देश मानिने नेपालले ६ बर्षपछि घरेलु मैदानमा टी २० फरम्याटका क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलको निलम्बनमा पर्नु भन्दा केहि अगाडी सम्म नेपालले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा कुनै न कुनै अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्दै आएको थियो । त्यो पनि नेपाल क्रिकेट संघको आयोजनामा । तर क्यान निलम्बन भएपछि कीर्तिपुर मैदानमा दुई वटा प्रतियोगिता भए । जसमा आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत केन्या र नामिविया विरुद्धको खेल नेपालले घरेलु मैदानमा गर्यो । त्यो पनि आइसीसीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ।
दर्शकले खचाखच भरिएको मैदान, अनि विदेशी टिमले नेपाल विरुद्ध खेलेको हेर्ने इच्छा नेपाली समर्थकलाई निकै बर्षदेखि थियो । नेपालमा आधिकारीक क्रिकेट संघ नभएका कारण नेपालले अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न निकै कठिन भएको थियो । यो विचमा नेपालले २०१६ मा नामिबिया विरुद्ध र २०१७ मा केन्या विरुद्ध एकदिवसिय सिरीजको आयोजना गर्यो । तर ती दुबै प्रतियोगिता नेपालको मैदानमा त थियो, तर सबै स्वामित्व आइसीसीको थियो । चाहे त्यो टिकटको होस या अन्य ब्यवस्थापन ।
त्यसपछि किर्तिपुर मैदानमा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता भएको छैन, तर विदेशी खेलाडी आएर खेलेका भने छन ।
अझ टी २० क्रिकेट प्रतियोगिता कीर्तिपुरमा नभएको त छ बर्षभन्दा बढि भइसक्यो । अन्तिम पटक एसीसी टी २० कप कीर्तिपुर मैदानमा भएको थियो । जहाँ नेपाल फाइनलमा पुगेको थियो र अफगानिस्तानसँग पराजित भएको थियो । त्यसयता नेपालले अन्तराष्ट्रिय टी २० प्रतियोगिताको आयोजना गर्न सकेको छैन ।
तर अब नेपाली क्रिकेटको रौनक फेरी कीर्तिपुर मैदानमा देखिने भएको छ । दक्षिण एसियाली खेलकुद अन्तर्गत कीर्तिपुर मैदानमा लामो समयको पर्खाईपछि अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता हुँदैछ । जसका लागि कीर्तिपुर मैदानको स्वरुपमा पनि परिवर्तन गरिन थालेको छ ।
टी २० फरम्याटमा हुने सागले फेरी नेपाली भूमीमा अन्तराष्ट्रिय रौनक ल्याउने विश्वास गरिएको छ । यो प्रतियोगितालाई सफल रुपमा आयोजना गर्न सकेमा निकट भविष्यमा अरु पनि प्रतियोगिता आयोजना गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अब नेपाल क्रिकेट संघ पनि आइसकेको अवस्थामा कीर्तिपुर मैदानमा फेब्रेवरीमा विश्व क्रिकेट लिगको ओमान र अमेरीका विचको सिरीज नेपालले होष्ट गर्दैछ । त्यसपछि पनि नेपालले आइसीसीबाट उमेर समुहका प्रतियोगिता गर्नका लागि राम्रो अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।